Church - Shenzhen aditọ Technology Co., Ltd.
Na oge a na-efe ofufe gburugburu, visual technology na-otu n'ime ndị kasị bara uru n'ụzọ na-arụ n'ọgbakọ. Ka Ikanam ngosipụta-anọgide na-adị oké ọnụ, ọtụtụ ụlọ ofufe gburugburu mba na-tụnyere ụka Ikanam ngosipụta n'ofufe ha nwetara dị ka ngwá ọrụ na-ekwurịta okwu ozi, ozi ọma, na-efe ofufe na ndị ọzọ.
Dị ka chọọchị dị iche iche-anọgide na-ahụ ibu, ikanam aghọwo-aga na-ngwọta na-agbasa ozi ha ma internally na externally. Ma ị na-na mkpa nke a na chọọchị Ikanam mgbidi iji gosipụta song lyrics na ozizi ihe, ma ọ bụ a ụzọ digital Ikanam ịrịba ama na-egosipụta ọkwa ndị na-agafe, Ikanam ngosipụta bụ ihe oké ọnụ, dị irè otú chọọchị na-ekwurịta okwu
The mgbanwe ọdịdị nke Ikanam ngosi ogwe na-enye ohere gị ụka mmepụta otu mfe megharia na Mmemme gị ngosipụta ka freshen elu anya nke gị na ogbo. Na ikanam ngosipụta, na-eme na anya na obi na-adị gị chọọchị ogbo imewe ọhụrụ dịtụbeghị mfe ma ọ bụ ndị ọzọ dị irè. The mgbanwe nke Ikanam ngosipụta na chọọchị-enye gị ohere ndokwa gị visuals na a dịgasị iche iche; i nwere ike egosiputa gị ngosipụta nade ike a nnukwu, enweghị nkebi ngosi ma ọ bụ i nwere ike achụsasịkwa gị ngosipụta gafee ogbo ka tinye omimi na akụkụ na-apụghị ga-enweta na ntule ma ọ bụ ndị ọzọ Monitors. Ọzọkwa, ikanam bụ n'ebe dị anya onwunwu ma na-achọ ihe dị ka ọkara ike nke ndị ọzọ ngosi ngwaahịa, na-akpata ego na gị chọọchị mmekọ mmefu.
Anyị oru ahịa otu dị njikere iji nyere ejikọ gị ozi zuru okè ụka Ikanam ngosi ngwọta nke ga-dabara gị ọhụụ na gị ego. Site ná mmalite ruo n'isi, ị pụrụ ijide n'aka na anyị otu ga-eduzi gị site ọ bụla nzọụkwụ nke usoro
Ụtọ ikanam awade enweghị nkebi nnukwu-format Ikanam ngosipụta na a dịgasị iche iche nke amuma, na-enye doro anya na zuru ezu image ngosipụta. Edebe gị ozizi usoro ọhụrụ bụ isi ihe na-edebe ọgbakọ gị na-abịa n'azụ. Anyị Ikanam mgbidi na-enye gị nnwere onwe na-reconfigure dị ukwuu dị ka ị chọrọ iji kwado gị ozi. Ma ị na-achọ na-egosipụta video, song lyrics, ma ọ bụ ndụ IMAG video, Ikanam video ngosipụta aka oru ngo ozi gị na-agaghị echefu echefu ụzọ.